Washington DC Capitol Hill gbapụrụ mgbe 'iyi egwu bọmbụ na -arụ ọrụ'
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Washington DC Capitol Hill gbapụrụ mgbe 'iyi egwu bọmbụ na -arụ ọrụ'
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Otu nwoke nọ na gwongworo ojii na-anya ụgbọ elu gbabara kpọmkwem na ụlọ ọba akwụkwọ Congress wee kwuo na ya nwere ihe mgbawa n'ime ụgbọ ahụ, tupu igosipụta ihe yiri mgbapu.
Amalitere nche nche taa na Capital Hill.
Ndị uweojii hapụrụ ebe dị n'akụkụ Ọbá akwụkwọ Congress.
Ndị uwe ojii na -azaghachi ụgbọ ala na -enyo enyo n'akụkụ Library nke Congress.
Na Tọzdee, etinyere nche nche na Capitol Hill na Washington, DC ka a gwara ndị ọrụ ka ha pụọ ​​n'ụlọ na akụkọ pụtara na ndị uwe ojii na -enyocha ihe mgbawa nwere ike n'ime ụgbọ elu pikọp.
Ndị uwe ojii Capitol US wepụrụ mpaghara gburugburu Ọbá akwụkwọ nke Congress na Capitol Hill mgbe onye ọkwọ ụgbọ ala wulitere n'èzí wee kwuo na ya nwere bọmbụ na gwongworo ya, onye isi ndị uwe ojii kwuru.
Na tweet, Ndị uwe ojii Capitol US kwuru na ha "na -aza ụgbọ ala na -enyo enyo n'akụkụ Library of Congress" ma gbaa ndị mmadụ ume ka ha nọrọ ebe ahụ nso.
Onye isi ndị uwe ojii, Tom Manger, gwara ndị nta akụkọ nọ nso ebe ahụ na n'elekere 9:15 nke ụtụtụ, otu nwoke nọ n'ime gwongworo ojii na-ebu ojii gbabara kpọmkwem n'ime ụlọ ọba akwụkwọ Congress dị na Washington, DC ma kwuo na o nwere ihe mgbawa n'ụgbọala ahụ, tupu igosipụta ihe yiri mgbapu. A na -eme mkparịta ụka ya na onye ọkwọ ụgbọ ala iji chọta "mkpebi udo", Manger kwuru.
Onye isi ndị uwe ojii ahụ gbakwụnyere, "Anyị amaghị ihe kpatara ya n'oge a."
Tupu mgbe ahụ, onyonyo a na -enyochaghị nke ewepụtara na mpụga Ọbá akwụkwọ Congress pụtara igosi onye ọkwọ ụgbọ ala ka nọ n'ụgbọ ahụ, na -akwụ ụgwọ ego dollar na mpụga gwongworo ahụ.
Onye a na-enyo enyo kwukwara na o tinyere ihe nkiri ndụ ihe nkiri ehichapụ ugbu a ka ọ nọ ọdụ n'azụ oche ịnya ụgbọ ala n'ime ụgbọ ala adọbara, ebe ọ na-agwa Onye isi ala US Joe Biden okwu ma kwuo na ya nwere ọtụtụ bọmbụ. Akụkụ nke ihe onyonyo ahụ pụtara igosi ihe yiri tankị gas, ihe mgbawa plastik na ọtụtụ nnukwu tub nke mgbanwe rụrụ arụ na gwongworo ahụ. O kwuru na ihe ndị a na -ekwu na -agbawa agbawa n'ime gwongworo ahụ bụ nke a na -agbacha agbacha ka ọ ga -eji naanị oke mkpọtụ ga -agbawa ya, dị ka ihu ihu ụgbọala ahụ ka mgbọ gbawara.
Nwoke ahụ kwukwara na e nwere ihe mgbawa anọ ndị ọzọ n'ebe ndị a na -akpọghị aha, na -ekwu na ndị ọzọ ebugala ha iche.
Facebook mechara kpochie akaụntụ nke onye ọrụ akpọrọ Ray Roseberry mgbe ọ gbasịrị nkeji iri atọ.
Ihe onyonyo ekesara na ntanetị gosipụtara ọtụtụ ụgbọ ala ndị mmanye iwu, gụnyere gwongworo ndị otu mmeghachi omume mberede, na -abanye na mpaghara amachibidoro. Na ihe nkiri TV, a hụrụ ndị uwe ojii ka ha na -agbachi ebe ahụ, na -ebulite ihe mgbochi iji gbochie ohere ịbanye.
Dị ka akụkọ ndị uwe ojii US Capitol ọhụrụ si kwuo, onye a na -enyo enyo mechara nyefee ndị uwe ojii.